WFP “Muhiimaddeenna koowaad waa xaqiijinta tayada iyo bad qabka caawinaadda aan bixino” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
WFP “Muhiimaddeenna koowaad waa xaqiijinta tayada iyo bad qabka caawinaadda aan bixino”
MAREEG 15 June 2016
Hay’adda WFP ayaa sheegtay in ay hubinayso Raashinka ay Ciidamada Booliiska ee Soomaaliya qabteen xilli ay Hay’addu u wadday gobalka Gedo ee Koofurta Soomaaliya.
Layla Cali, oo ah Sarkaalka u qaabilsan Xafiiska WFP ee Soomaaliya dhanka Xiriirka, ayaa u sheegtay SONNA in aysan rumaysnayn WFP, in Raashin gaargaar ah oo dhacay uu u yaallo Muqdisho, balse waxa ay intaa raacisay in ay hubnayso WFP haddii badeecadeeda loo kaydiyay si aan wanaagsanayn oo ka dibna ay waxyeello soo gaartay intii ay sugaysay daabulidda.
“Si wanaagsan ayay uga warhayaan Dadka aan caawino in muhiimadeenna koowaad ay tahay xaqiijinta Tayada iyo bad qabka caawinaadda aan bixino, waxaanna isticmaalaa cabirka ugu sarreeya si aan u hubinno arinkaas” ayay tiri Leyla oo la hadashay SONNA.
Sarkaalka u hadlay hey’adda WFP ayaa ka gaabsatay su’aal ahayd, in Badeecada la soo bandhigay ay ku dhaganayd calaamadda WFP, Ciidamada Amaankuna sheegeen in ay ku waqtiyaysnayd Sanadkii 2015,
War Deg Deg ah: Madaxweynaha oo xilka ka qaadey Taliyihii Nabad Sugida, magacaabeyna taliye cusub oo KMG ah
Ciidamada XDS oo Qabsadey saldhig ay Shabaab ku lahaayeen deegaanka Yasooman ee G/Hiiraan